ထီဖွင့်ပွဲနေ့မှာ Online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ လူရွှင်တော်ချက်ကြီး ရဲ့ "လွဲလွဲလေးပဲကောင်းပါတယ်"Video ဖိုင် - Shwe Yaung Lan
7 Plus အငြိမ့်အဖွဲ့ နဲ့ အတူ ပရိသတ်တွေကို ရယ်မောပျော်ရွှင်အောင် တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ လူရွှင်တော်ချက်ကြီးဟာ ဟာသဉာဏ်လည်း ကောင်းလှသလို သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေက တကယ့်ကို ကြည့်ရသူအဖို့ ရယ်မောပျော်ရွှင်ရတာပါ…
အနုပညာပိုင်းမှာလည်း ပြည့်ဝသလို နှလုံးရည်အပိုင်းမှာလည်း သဘောကောင်းလှတဲ့ လူရွှင်တော်ချက်ကြီးဟာ ပရဟိတအလုပ်တွေကို ကူညီပေးတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်…အထူးသဖြင့် သက်ကြီးလူရွှင်တော်တွေအတွက် ရန်ပုံငွေရှာတဲ့ပွဲတွေမှာ ကိုယ်တိုင် တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင်ပြီး ကူညီတတ်သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်…
ခုတလော ပရိသတ်တွေကြားမှာ သူ့ရဲ့ Tik Tok ဗီဒီယို အတိုလေးက အရမ်းကို နာမည်ကြီးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်…. ထီဖွင့်တဲ့နေ့မှာ သူထီမပေါက်တဲ့အကြောင်းကို “လွဲလွဲလေးပဲ ကောင်းပါတယ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းနဲ့ ဗီဒီယိုအတိုလေး မျှဝေခဲ့ရာမှာတော့ ပရိသတ်တွေ ရယ်မောပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..
လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ချက်ကြီးဟာ ဒါရိုက်တာ ပြည်ဟိန်းသီဟ ရိုက်ကူးမဲ့ အငြိမ့်ဖျော်ဖြေပွဲကို7Plus ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့ အတူ လာမယ့် ၁၂ ရက်နေ့မှာ ဓနုဖြူမှာ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
ပရိသတ်ကြီးတို့ရော ထီပေါက်ကြလား …မပေါက်ရင်တော့ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်လိုက်ပါအုံး…အောက်မှာ ကြည့်ကြည့်နော်…
Video Source : KoChat Gyi
7 Plus အၿငိမ့္အဖြဲ႔ နဲ႔ အတူ ပရိသတ္ေတြကို ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးေနတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ခ်က္ႀကီးဟာ ဟာသဉာဏ္လည္း ေကာင္းလွသလို သူ႔ရဲ႕ သရုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက တကယ့္ကို ၾကည့္ရသူအဖို႔ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ရတာပါ…
အႏုပညာပိုင္းမွာလည္း ျပည့္ဝသလို ႏွလံုးရည္အပိုင္းမွာလည္း သေဘာေကာင္းလွတဲ့ လူရႊင္ေတာ္ခ်က္ႀကီးဟာ ပရဟိတအလုပ္ေတြကို ကူညီေပးတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္…အထူးသျဖင့္ သက္ႀကီးလူရႊင္ေတာ္ေတြအတြက္ ရန္ပံုေငြရွာတဲ့ပြဲေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ တက္တက္ႀကြၾကြ ပါဝင္ၿပီး ကူညီတတ္သူလည္း ျဖစ္ပါတယ္…
ခုတေလာ ပရိသတ္ေတြၾကားမွာ သူ႕ရဲ႕ Tik Tok ဗီဒီယို အတိုေလးက အရမ္းကို နာမည္ႀကီးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္…. ထီဖြင့္တဲ့ေန႔မွာ သူထီမေပါက္တဲ့အေၾကာင္းကို “လြဲလြဲေလးပဲ ေကာင္းပါတယ္” ဆိုတဲ့ သီခ်င္းနဲ႔ ဗီဒီယိုအတိုေလး မွ်ေဝခဲ့ရာမွာေတာ့ ပရိသတ္ေတြ ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ရတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္..
လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ခ်က္ႀကီးဟာ ဒါရိုက္တာ ျပည္ဟိန္းသီဟ ရိုက္ကူးမဲ့ အၿငိမ့္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကို7Plus ဝိုင္းေတာ္သားေတြနဲ႔ အတူ လာမယ့္ ၁၂ ရက္ေန႔မွာ ဓႏုျဖဴမွာ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္…
ပရိသတ္ႀကီးတို႔ေရာ ထီေပါက္ၾကလား …မေပါက္ရင္ေတာ့ ဒီဗီဒီယိုေလးကိုၾကည့္ၿပီး ရယ္ေမာေပ်ာ္ရႊင္လိုက္ပါအံုး…ေအာက္မွာ ၾကည့္ၾကည့္ေနာ္…
Previous post ရွှေသားစစ်စစ် သိန်းတစ်ထောင်ကျော်ဖိုးရှိတဲ့ ထိုင်မသိမ်းနဲ့ Show လျှောက်ခဲ့တဲ့ Model ရွှေစင်